Iimenyu eziCwangcisiweyo eziDala
Imenyu ibonakalisiwe phezulu kwiskripthi esihle se-calligraphic ngelixa iinkcukacha zemenyu yakho zihlala phantsi komgca wokuhombisa kwi-serif entle, yeklasikhi.
Izimemo zoMtshato zoLwandle eziPeyintiweyo
Ngobunewunewu, iibrashi ezingaqondakaliyo ezimele isibhakabhaka, ulwandle kunye nesanti zigcwalisa imvelaphi yoyilo lwesimemo somtshato, ngolwazi lwakho lusethwe kwiifonti zakudala ezigqunywe ngaphezulu.
I-Elegant Typography Izimemo zoMtshato
Esi simemo somtshato esihle sihonjiswe ngezinto ezahlukeneyo zochwethezo olusuka kubuthathaka balo kunye nohlobo lwangoku olungenaserif kwisikripthi esithandekayo sothando.
Izimemo ezihle zokuziqhelanisa nesidlo sangokuhlwa
Isimemo esihle sokuziqhelanisa nesidlo sangokuhlwa esibonisa zonke iinkcukacha zakho zokulungiselela isidlo sangokuhlwa.
Esi simemo somtshato sanamhlanje sineebrashi ezinesibindi ezenza iintyatyambo ezingafakwanga ngaphambili.
Izimemo zoMtshato ezitshatileyo zeCalligraphy
Isimemo somtshato esine-calligraphy entle kunye namagqabi aluhlaza athambileyo kunye neepopu ezifihlakeleyo zeentyatyambo ezithambileyo, kunye neenkcukacha ze-watercolor ze-pastel kunye ne-monogram enkulu ngasemva.
Iimenyu eziGreenery Menus
Imenyu yomtshato elula ene-chic calligraphy kunye nezinye iifonti ezintle, ezibandakanya i-monogram yakho ehonjiswe ngotshani obunamagqabi kunye nokuhlanjwa kwesilumko ngasemva.
Izimemo zoMtshato oMdaka oluhlaza
Esi simemo somtshato esicocekileyo sanamhlanje sibonisa isebe lomthi we-eucalyptus eligubungela amagama akho omtshato kwimibala ethambileyo engwevu naluhlaza. Umva ugqunywe yimigca ethe tyaba ecekeceke.
Izimemo ezisesikweni zoMtshato zoMtshato
Isimemo esihle somtshato esidala esinemibala eluhlaza eluhlaza ejikeleze iinkcukacha zakho kuhlobo oluncinci lwe-serif, esongezwa sisicatshulwa esihle samagama akho.
Izimemo Zomtshato Zangoku
Uyilo oluncinci kunye nolwanamhlanje lunefuthe lokwenyani.
Isimemo seLeafy Izimemo zoMtshato
Esi simemo somtshato sihle sinamagqabi aluhlaza kunye nesakhelo esimhlophe esijikeleze iinkcukacha zomtshato wakho. Lonke ulwazi lwakho lomtshato wesiko lucacisiwe kusetyenziswa uhlobo lwangoku. Umva wesimemo ubandakanya imvelaphi yecolorcolor.
Izimemo zoMtsalane zoMtshato eziGqibeleleyo
Esi simemo somtshato esihle kakhulu sifuna ukubanjwa kobuqu babayili bethu abanetalente ngaphakathi endlwini abaya kwenza ukubonakala kwamagama akho kwaye baqinisekise ngokugqibeleleyo. Olu luyilo lweklasikhi lubonisa ukushicilelwa okumnyama ngaphezulu kwemvelaphi etyebileyo emhlophe. ** Nceda ufake amagama akho apheleleyo kwiBhokisi yesiCelo sokwenza ngokwezifiso zethu !! :) **
Izimemo Zomtshato Zangoku zeBodoni
Esi simemo somtshato esihle, esincinci lukhetho olufanelekileyo kumnyhadala womtshato wakho omnyama, okanye kwisibini sanamhlanje esibona ubuhle ngokulula.
Izimemo zoMtshato zaseGadini ezintle
Iintyatyambo zeWatercolor zincoma umbala ongathathi hlangothi kwesi simemo somtshato, ngohlobo lonyango lwangoku kunye noyilo olungathathi hlangothi.
IiNtaba zeWaterolor Amakhadi okuphendula umtshato
Umphambili wale khadi yokuphendula yomtshato ibonisa uyilo lweentaba lwe-watercolor olungapheliyo, olufumaneka kukhetho lwemibala.
Izimemo zomtshato eziKhanyayo
I-confetti yanamhlanje kunye neskripthi sothando esihombisa olu luyilo lwesimemo somtshato. Imvelaphi echumileyo yongeza umnxeba omhle kuyilo. Umva wesimemo ubandakanya i-monogram yakho yomtshato ukuze ubambe umntu uqobo.
Ikhadi lendawo yomtshato waseRustic elinemvelaphi ebonakalayo ebonakalayo kunye nembonakalo entle yeentaba nemithi.
Inkqubo yezoMtshato yeNtaba
Le nkqubo yomtshato intle kangaka inemvelaphi yeentaba kunye nemithi ebhangqwe ngohlobo lwesibindi seenkcukacha zenkqubo yakho.
Izimemo zoMtshato zika-Awash
Esi simemo somtshato sibonisa umzobo we-watercolor opeyintiweyo kunye nokukhethwa kombala we-pink blush okanye i-mint emhlophe.
Iinkqubo zomtshato eziNtshuliweyo
Iinkqubo ezintle zomtshato ezibonisa iintyatyambo ezintle kunye ne-greenery accents kunye ne-calligraphy yothando. Kulula ukwenza ngokwezifiso.
camo kunye nelokhwe emhlophe yomtshato
ngowuphi umnwe ngumnwe otshatileyo
imibala yepeyinti yokuhlambela encinci